မဒေါင်းလုပ် Avast Free Antivirus 2021 မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Avast Free Antivirus 2021
မဒေါင်းလုပ် Avast Free Antivirus 2021,
Avast Free Antivirus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သောကွန်ပျူတာများအတွက်အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်မှုစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် virtual ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဆန့်ကျင်။ တိုးတက်လျက်ရှိသည်။
အင်တာနက်ကိုသုံးသောကွန်ပျူတာတိုင်းသည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၊ မည်သည့်ကွန်ယက်နှင့် (သို့) အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိလျှင်သော်၎င်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ရှိသည်။ Avast Free Antivirus, ဒီအန္တရာယ်ရှိသည့်ကြားမှလုံခြုံမှုရှိစေရန်မှန်ကန်သောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသည်မှာဗိုင်းရပ်စ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားခြင်းနှစ်ခုလုံးတွင်အလွန်အောင်မြင်သည်။ Avast Free Antivirus တွင်၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအင်ဂျင်နှင့် AVG ဗိုင်းရပ်စ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအင်ဂျင်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုတိုးပွားစေသည်။
Avast ကို Install လုပ်နည်း
အောက်ပါဗီဒီယိုတွင် Avast Free Antivirus, ကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးအများဆုံး antivirus ပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သည် -
Avast အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများသည်မတူညီသောဒြပ်စင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ CyberCapture element ကို software ၏ကျောရိုးဖြစ်သောဗိုင်းရပ်စ်ဖော်ထုတ်နိုင်သော ဦး နှောက်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Behaviour Shield သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်ကွန်ပျူတာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်သေချာစေသည်။ Avast Password Vault သည်သင်၏စကားဝှက်များကို encrypt ပြုလုပ်ပေးရုံသာမကအင်တာနက်ကိုသုံးတိုင်းစကားဝှက်ရေးရန်ပြsaveနာကိုသက်သာစေသည်။ Avast Browser Cleanup သည်သင့် browser အားသန့်ရှင်းစေပြီးသင့် browser ၏ default search engine နှင့် home page ကိုပြောင်းလဲစေသောမလိုအပ်သော browser add-ons များမှသင့်အားလွတ်မြောက်စေသည်။ Avast ဝိုင်ဖိုင်စစ်ဆေးရေးသည်သင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေသည်။ အန္တရာယ်ကင်းသောစကားဝှက်များမှအန္တရာယ်ရှိသည့်ပလပ်ဂင်များအထိ Smart Scan၊ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ခေတ်မမီတော့သောဆော့ဖ်ဝဲများ၊ malware စနစ်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုအားနည်းချက်များကိုတွေ့။Software Updater ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုအမြဲတမ်းအဆင့်မြှင့်ထားပါသည်။ Rescue Disk သည်အလွန်ထိရောက်သောဗိုင်းရပ်စ်များကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်သင်၏စနစ်အတွင်းနက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်နိုင်ပြီးအစတွင်အခြေချနိုင်သည့်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Avast Free Antivirus နှင့်အတူပါရှိသည့် tools များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး - အသိဉာဏ်ရှိသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ malware၊ သူလျှိုထည်များ၊
Behavior Shield - သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူပုံစံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့်သင့်အားသုညနေ့ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ransomware များမှကာကွယ်ပေးသည်။
CyberCapture - မသိသောဖိုင်များကိုသီးခြားခွဲထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဖိုင်များသည်လုံခြုံမှုရှိ၊ မရှိလုံခြုံမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်မိုးတိမ်တွင်လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ပါသည်။
Anti-Phishing - လိမ်လည်မှုနှင့်အတုဆိုက်များကိုအလိုအလျောက်တားဆီးပေးပြီး browser extension များ (plugins) မလိုအပ်ပါ။
ဝိုင်ဖိုင်စစ်ဆေးရေး - သင်၏အိမ်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တွင်အားနည်းချက်များကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်ဟက်ကာများကိုဝေးဝေးရှောင်စေသည်။
Software Updater - လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များကိုပြုပြင်ရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်သင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်သည်။
စကားဝှက်များ - သင်၏စကားဝှက်အားလုံးကို master password တစ်ခုတည်းဖြင့်သိမ်းထားပါ။
Browser သန့်ရှင်းရေး။ ။ သင်မလိုအပ်သောသို့မဟုတ်မလိုအပ်သောအခြား add-ons များကိုသင်၏ဘရောင်ဇာမှဖယ်ရှားပါ။
Recovery Disk - ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပါက boot မလုပ်ခင် CD သို့မဟုတ် USB disk တွင် Recovery Disk ပုံရိပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ၎င်းကိုစတင်မတားဆီးနိုင်ပါ။
Avast နောက်ဆုံးအခြေအနေ 20.10.2442 နှင့်အတူလာမည့်အပြောင်းအလဲများ
တိုးချဲ့ထားသောစကားဝှက်ကာကွယ်ခြင်း - ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ beta ဗားရှင်းများတွင်သင်၏စကားဝှက်များကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။ (Chrome, Edge, Firefox နှင့် AVG Secure Browser - Premium Versions များသာ)
Recovery Disk တိုးတက်လာခြင်း - ၀ င်းဒိုး ၇ အသုံးပြုသူများသည်ဤအင်္ဂါရပ်သည်သူတို့အတွက်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသိခြင်းကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်သက်ဆိုင်ရာ .DLLs များကိုစနစ်တကျသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Avast Free Antivirus Update 20.9.2437 တွင်အသစ်အဆန်း
လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်မဲပေးခြင်း - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအထူးလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်မဲပေးခြင်းသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအတွက်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုတင်သွင်းခြင်း။ Menu> အကြောင်းသွားပြီး Avast မင်းရဲ့ preference ကိုပြောပါ (Premium အသုံးပြုသူများအတွက်သာ)
ဂရပ်ဖစ်တူရကီ interface ကို
Avast Free Antivirus 2021 မသတ်မှတ်ချက်များ
တီထွင်သူ: AVAST Software
Keylogger အမျိုးအစားပရိုဂရမ်များကိုထောက်လှမ်းရန် application...
Trend Micro ၏ Lock Screen Ransomware Tool ကို သုံး၍ သင်၏ system သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသော...
RogueKiller ဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လက်ရှိသုံးနေသောပရိုဂရမ်အားလုံးကို scan...
Autorun Injector ပရိုဂရမ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ထည့်သွင်းလိုက်သော USB disk များ၏ autorun...
Norton Power Eraser သည်သင်၏ system...
Cybereason RansomFree အပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုကူးစက်စေနိုင်သော ransomware...
HitmanPro.Alert application သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုထိခိုက်စေနိုင်သော malware များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ...
RemoveIT Pro သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုကူးစက်စေသော malware၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ trojans...
Secure Webcam program သည် PC အသုံးပြုသူများအတွက်အကြီးမားဆုံးအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်သည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ...
Anvi Smart Defender သည်သင်၏ကွန်ပျူတာအား Trojans, adware, spyware, bot, virus...
Autorun Virus Remover သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို autorun.inf...
Kaspersky ဆယ်တင်ရေးအခွေ 18 သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို malware...
Spyware Doctor သည် spyware ဖျက်ရန်နှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီအကာအကွယ်ပေးနိုင်သော anti-spyware program...
SUPERAntiSpyware သည် multidimensional scanning နည်းပညာနှင့် processor...
Microsoft Malicious Software Removal Tool သည် malware...
AntiLogger သည် ခိုင်မာသောဆန့်ကျင်ရေးနည်းလမ်းများအပါအဝင်...